Fankalazana ny fivoriana ankapobeny isan-taona ataon'ny Fraport an'ny taona 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fankalazana ny fivoriana ankapobeny isan-taona ataon'ny Fraport an'ny taona 2021
Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
2021 06 01 anr frapo ally indray en 1
Ny jeneraly FRAPORT Schulte dia nibanjina fijery feno fanantenana momba ny volana vitsivitsy manaraka: “Noho ny fandefasana ny programa fanaovana vaksiny dia hita ny fiverenana tsikelikely amin'ny fari-pitsipika mahazatra. Manomboka mahita ny famahana ny fameperana amin'ny fiainana andavanandro izahay. Afaka manao drafitra indray isika, ary koa amin'ny fialantsasatra manaraka. Vaovao tsara izany. ”
Ny fivorian'ny Fraport AG isan-taona fanao isan-taona (AGM) ho an'ny tompon-trano dia nanomboka androany (1 Jona) tamin'ny 10:00 maraina CEST, araka ny fandaharam-potoana.
Noho ny areti-mandringana Covid-19 dia tazonina indray amin'ny alàlan'ny endrika virtoaly irery ny AGM.
Ny valiny dia napetraka ny fanontaniana 39 napetrak'ireo tompon-trano mialoha.
Samy samy hamaly ireo fanontaniana mandritra ny AGM ny filohan'ny birao mpanara-maso an'i Fraport AG, Michael Boddenberg (izay minisitra ara-bola any Hesse ihany), ary ny talen'ny birao mpanatanteraka, Dr. Stefan Schulte. Ireo tompon-trano sy ny solontenany nahazo alalana dia afaka mampiasa ny zony amin'ny alàlan'ny Fraport's Vavahadin-tserasera AGM.
Nandritra ny lahateniny ho an'ny AGM, ny CEO Schulte dia nandray fomba fijery manantena momba ny volana vitsivitsy manaraka: "Noho ny fanombohana ny programa fanaovana vaksiny, hita eo ny fiverenana tsikelikely amin'ny fari-pitsipika mahazatra. Manomboka mahita ny famahana ny fameperana amin'ny fiainana andavanandro izahay. Afaka manao drafitra indray isika, ary koa amin'ny fialantsasatra manaraka. Vaovao tsara izany. ”
Na eo aza izany, na eo aza ny famantarana tsara ankehitriny, mino i Schulte fa mbola haharitra taona maro mandra-piverin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ho amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy indray: Ho anay dia midika izany fa tsy maintsy manomana ny orinasa amin'ity fifaninanana mihamitombo ity isika - ary izany indrindra no ataonay. Niasa tamin'ny ambaratonga rehetra izahay mba hampihenana ny vidiny sy hampiakarana ny fahombiazana. "
Tamin'ny Fihaonamben'ny Jeneraly fanao isan-taona (AGM) Fraport AG, izay notontosaina androany (1 Jona) tamin'ny endrika virtoaly ihany, dia nankatoavin'ny tompon-trano ny laharam-pahamehana rehetra. Ny tomponandraikitra dia nanamafy ny fihetsiky ny birao mpanatanteraka sy mpanara-maso ny orinasa ho an'ny taom-piasana 2020 (mifarana 31 desambra), tamin'ny 99.81 isan-jato ary 98.25 isan-jato. Ankoatr'izay, ny tompon'andraikitra dia nifidy an'i Sonja Wärntges, CEO an'ny DIC Assets AG, ho an'ny birao mpanara-maso an'i Fraport (miaraka amin'ny 99.61 isan-jaton'ny vato). Ramatoa Wärntges dia efa mpikambana ao amin'ny birao mpanara-maso Fraport hatramin'ny Oktobra 2020, taorian'ny fanendrena azy tamin'ny alàlan'ny didin'ny fitsarana. Nanaiky ny famoronana fahazoan-dàlana (97.62 isan-jato) sy renivola misy fepetra (90.92 isan-jato) ihany koa ireo tompon-trano mba hanomezana safidy lehibe kokoa ho an'ny orinasa amin'ny ho avy - na izany aza, tsy mikasa ny hampiasa ireo safidy ireo i Fraport amin'izao fotoana izao.
Mpandray anjara maherin'ny 1,160 no nanaraka ny AGM mivantana mivantana tamin'ity taona ity. 73.02 isan-jaton'ny tahiry renivohitra Fraport AG no nisolo tena izany. Ny filohan'ny birao mpanara-maso Fraport Michael Boddenberg, izay minisitry ny fitantanam-bolan'ny State of Hesse ihany koa dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny AGM tamin'ny 10:00 maraina ary namarana ny fizotrany tamin'ny 13:19 hariva.
Vaovao fanampiny momba ity taona ity Fivoriana ankapobeny isan-taona anisan'izany ny sary tsara kalitao hita ao amin'ny tranonkalan'i Fraport.